कस्तो छ "ए मेरो हजुर २" ? चलचित्र समीक्षा | Hamro Patro
सफल चलचित्र "ए मेरो हजुर"का नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र निर्देशक शिव रेग्मी अहिले हामीमाझ रहेनन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रले यी दुईको कमिलाई सदैव याद राख्नेछ । त्यही चलचित्र "ए मेरो हजुर"मा स्व. नायक र निर्देशकसँग सहकार्य गरेकी नायिका झरना थापाले निकै लामो समयपछि उक्त चलचित्रको सिक्वल "ए मेरो हजुर २" पहिलो पटक निर्देशन गरेर दर्शक माझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेकी छिन् । पूर्णतया रोमान्टिक चलचित्र "ए मेरो हजुर २" ले दर्शकको मनमा पूरानो चलचित्रले बनाएको स्थान यथावत राख्न सक्छ त ? आउनुहोस् जानौं चलचित्र ए मेरो हजुर २ को समीक्षामा ।
प्रेम अर्थात सलिनमान बानियालाई आफ्नो बाल्यकालमै स्कूलको साथी माया (साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह) सँग प्रेम भएको हुन्छ । तर बुबाको सरुवा भएपछि त्यो ठाउँ छाडेर गएका सलिनको कलिलो प्रेम त्यसबेला अधुरै रहन्छ तर सलिनले मायालाई वचन दिएका छन् कि उनी मायालाई भेट्न अवश्य आउनेछन् । ठूलोभएपछि सलिन आफ्नो दुई साथी सलोन बस्नेत र अम्बरसँग पोखरा जान्छन् र त्यहाँ गएर मायालाई भेट्छन् । तर समयसँगै सबैथोक परिवर्तन हुन्छ भने झै मायामा पनि परिवर्तन आइसकेको छ । उनलाई अब सलिनसँग प्रेम छैन र शिघ्र उनको विवाह अरु नै कसैसँग हुन गइरहेको छ । यस्तोमा अब सलिनले साम्रागीको माया कसरी पाउँछन् । के यी दुवै फेरि प्रेममा बाँधिन्छन् त ? यो सब थाहा पाउन चैं यहाँले चलचित्र "ए मेरो हजुर २" हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
हरिहर अधिकारीले लेखेको चलचित्रको कथा पुरानो रोमान्टिक फिल्म फर्मुलामा छ । उनलाई पटकथामा भने सामीप्यराज तिमल्सिनाले साथ दिएका छन् र यी दुईले लेखेको चलचित्रको पटकथा ठिकठाक छ । पटकथा निकै सीमित पात्रहरुमा लेखिएको छ जसकारण चलचित्र कहीकतै बोरिङ लाग्दछ । त्यस्तोमा चलचित्रलाई उत्कृष्ट संवादले सम्हालेको छ । दोहोरो अर्थ लाग्ने संवादहरुले दर्शकलाई खुब हसाउँछ र चलचित्रबाट ध्यान भट्काउन भने दिंदैन । बाँकी चलचित्रको दोश्रो हाफमा सलोनको लभस्टोरीको अगाडि सलिनको लभस्टोरीमा दर्शकको रुचि कम जानेछ तर लजिक नभएपनि उत्कृष्ट तरीकाले लेखिएको क्लाइमेक्सले दर्शक हलबाट बाहिर निस्किँदा उनीलाई खुशी भने अवश्य पार्नेछ ।
नवनायक सलिनमान बानियाँले आफ्नो पहिलो चलचित्रमा राम्रो काम गरेका छन् । उनी क्युट लाग्दछन् तर पहिलो हाफमा थुप्रै दृश्यहरुमा पटकथा र संवादले सलोनलाई धेरै ठाउँ दिँदा सलिन ओझेलमा परेको महशुस हुन्छ । साम्रागी राज्यलक्ष्मी शाहको पात्र भने खाशै राम्ररी लेखिएको छैन । उनी बोल्ड लाग्दछिन् तर उनको पात्रमा त्यो बोल्डनेस छैन । सलोन बस्नेतले चलचित्रलाई धेरै हदसम्म आफ्नो काँधमा लिएर हिँडेका छन् । उनको कमिट टाइमिङ प्रभावशाली छ । सुमन पौडेलले पनि राम्रो काम गरेका छन् ।
सञ्जय लामाको छायांकन उत्कृष्ट छ । विशेषगरि तिलिचोको यात्रा पर्दामा हेर्दा मजा आउँछ । बनिश शाह र मिलन श्रेष्ठका सम्पादन अलि कसिलो हुन सक्थ्यो । चलचित्र २ घण्टा ३० मिनेटको छ जुन चलचित्रको पक्षमा जाँदैन । शैलेस श्रेष्ठको ब्याकग्राउण्ड स्कोर ठिकठाक छ । वसन्त सापकोटा र कल्याण सिंहको संगीत चलचित्रको उत्कृष्ट पक्ष हो । तीनवटै गीतहरु सुमधुर छन् । रेनाशा बान्तवा राई र कविराज गहतरातको नृत्य निर्देशन राम्रो छ ।
नव निर्देशक झरना थापाले आफ्नो पहिलो चलचित्रलाई धेरै हदसम्म न्याय गरेकी छिन् । उनले बेला बेलामा आफ्नो चलचित्रमा पुरानो ए मेरो हजुरलाई सम्झिएको र स्व. श्रीकृष्ण श्रृेष्ठलाई श्रद्धाञ्जलि दिएको दृश्यहरु निकै मिठा लाग्दछन् तर उनको चलचित्रमा थुप्रै कुराहरु चित्त नबुझ्दा पनि छन् । साम्रागीमा पोखरामा भेट्न धेरै समय नलागेको यो चलचित्र २ घण्टा ३० मिनेटको हुनु चलचित्रको मुख्य समस्या हो । यद्यपि उनको पहिलो प्रयास राम्रो छ ।
समग्रमा चलचित्र ए मेरो हजुर २ ले दर्शकलाई चलचित्र हेरुञ्जेल बाँधी राख्नेछ । उत्कृष्ट गीत, उत्कृष्ट क्याइमेक्स, र सलोन बस्नेतको प्रेमकथाले चलचित्रलाई एक पटक हेरिनु पर्ने चलचित्र अवश्य बनाउँछ ।
रेटिङ : 3/5